Caalamka, 30 August 2016
Talaado 30 August 2016
Maraakiibta ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga iyo sidoo kale maraakiib kale oo ay leeyihiin hay’ado samafal ah ayaa xeebaha dalka Libya kasoo bad-baadiyay kumanaan qof oo ah tahriibayaal ah, kuwaas oo doonaya in ay soo gaaraan qaaradda Yurub.
Yemen: 45 qof oo Ku Dhintay Weerar Ismiidaamin ah
Mas’uuliyiin ayaa sheegay in weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada ku taalla Koonfurta dalka Yemen ee Cadan ay ku dhinteen ugu yaraab 45 qof, islamarkaana tobaneeyo kale ay ku dhaawacmeen.
Kanada: Wasiiro iyo Xildhibaanno Kulan la Qaatay Soomaali
Magaalada Toronto ee dalka Kanada, waxa Axaddii ka dhacay kulan ay wasiiro ka tirsan dowladda Kenada iyo xildhibaanno la yeesheen qowmiyado kala gaddisan oo Kanada ku dhaqan, haba ugu badnaadaanee Soomaali.
Mucaaradka Siiriya oo Goobo Cusub La Wareegay
Mucaaradka Siiriya oo gacan ka helaya dowladda Turkiga, ayaa Axaddii kala wareegay shan tuulo iyo hal magaalo kooxda mitidiinta Kurdiyiinta ee waqooyiga Siiriya.
Q.M. Oo Cambaareysay Kuuriyada Waqooyi
Golaha Ammaanka ee Q.M. ayaa si wada jir ah u cambaareeyay tijaabada Kuuriyada Waqooyi ee gantaalkeeda riddada dheer ee ay dhawaantan sameysay.
Dhimashada Dhulgariirka Talyaaniga oo Korortay
Dhulgariirkii arabacdii ruxay dalka Talyaaniga ayaa dilay ugu yaraan 247 qof islamarkaana dhaawacay in ka badan 360, sida ay maanta sheegtay hay’adda badbaadinta rayidka Talyaaniga.
Dhulgariir Xooggan oo ku Dhuftay Talyaaniga
Dhulgariir xooggan ayaa maanta ruxay bartamaha dalka Talyaaniga, kaasi oo sababay waxyeello xooggan islamarkaana dilay ugu yaraan 37 qof.
Turkiga oo Howlgal ka Billaabay Xuduudda Syria
Madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in howl-gal milatari laga billaabay xuduudda woqooyi ee dalkaas uu la wadaago Syria, ayada oo la bartilmaameedsanayo dagaalayahanada Kooxda Daacish iyo kuwa Kurdiyiinta Syria.
Wareysi: Aabaha Wiil Somali Ahaa oo Lagu Dilay Sweden
Magaalada Gothenburg ee dalka Sweden waxaa xalay ku dhintay wiil Soomaali ah oo sideed jir ah kadib markii qol uu ku jiray lagu tuuray bam gacmeed.
QM oo 'Ku lug Yeelatay Fiditaanka Cudurka Daacuunka'
Markii ugu horreysay tan iyo markii uu sanadii 2010 cudurka daacuunka ama shuban biyoodka ku dilay dalka Haiti 10,000 oo qof, ayaa QM waxa ay qiratay in ciidamadeeda nabad ilaalinta ay kaalin ku lahaayeen fiditaanka cudurkaas.
Lix Qof oo ku Dhintay Laba Qarax oo ka Dhacay Turkiga
Ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay in ka badan 120 kalena waa lagu dhaawacay laba qarax baabuur oo maanta ka dhacay meel u dhow saldhigyo boolis oo ku yaalla bariga dalka Turkiga.
Abaalmarin Loo Yaboohay Dilka Imaam Masjid
Golaha xiriirada Islaamiga ah ee Mareykanka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaan CAIR ayaa ballan qaaday 10,000 oo dollar oo la siinayo ciddii keentay akhbaar ku saabsan dadkii ka dambeeyey dilka Imaam masjid oo lagu dilay magaalada New York.